Axmed Madobe,madaxa maamulka Kmg aha ee Juba ayaa sheegay in u wareejinayo dekadda iyo airporka Kismayo |
Axmed Madobe,madaxa maamulka Kmg aha ee Juba ayaa sheegay in u wareejinayo dekadda iyo airporka Kismayo
Viagra without prescription, dapoxetine without prescription. Axmed Madoobe Hogaamiyaha maamulka Jubba ayaa waxa uu si diiran uga hadlay heshiiskii hore Dowlada Federaalka iyo Maamulka KMG ah ee Jubba ay ku gaareen Magaalada Addis Ababa ee Xarunta Dalka Ethiopia.
Axmed Madoobe waxa uu sheegay in Heshiiskaasi uu ahaa mid looga soo gudbaayay Khilaafka ka taagnaa Dekada iyo Garoonka Kismaayo islamarkaana lagu wareejiyo Dowlada Federaalka maamulka labadaasi goobood.
Axmed Madoobe oo arrintaasi si qoto dheer uga hadlaayay, ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in xiligaani uu Maamulka u jeestay dhaqan gelint Qodobadii maadaama uu yiri Kismaayo ka dhamaatay Colaadihii Alshabaab ay ka wadeen.
Dhaqan galinta qodobadaasi inay bilaabatay ayaa waxa uu Axmed Madoobe tusaale u soo qaatay dib u heshiisiinta laga dhex wado beelaha wada dega deegaanada Jubbooyinka iyo dhameystirka maamulkiisa.
Axmed Madoobe Hogaamiyaha maamulka KMG ah ee Jubba ayaa waxa uu sidoo kale, farta ku goday inaanay wax sharuud ah ku xireyn hadii Dowlada Federaalka Soomaaliya la wareegeyso mamulka Dekada iyo Garoonk Kismaayo,taasina ay dhamaatay, wuxuuna cadeeyay inuusan xiligaani diyaar u aheyn Amar diido ama khilaaf.
Dhanka kale, waxa uu sheegay in Dowlada looga baahan yahay inay ka soo baxdo waajibaadka saaran maamulkoodana ay ku wareejinayaan.
Haddalka Axmed Madoobe ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli ay DFS xal ka gaareyso xalinta Khilaafaadka ka dhexeeya Beelaha dega Kismaayo.